बैतडीको खोडपेमा भएको बस दुर्घटना को वास्तविक कारण गाडी थोत्रो हुनु रहेको चालकको भनाइ-कन्चन आवाज - Kanchan Aawaz
Kanchan Aaawaj२०७७ कार्तिक २८, शुक्रबार १६:३२ गते
२०७७ कार्तिक २८ गते,रोज ०६.
यस्तै बसमा सवार अर्का यात्रु कञ्चनपुरको शुक्लाफाँटा नगरपालिका–७ का ५५ वर्षीय हर्कबहादुर धामीले पनि बसमा नै खराबी भएका कारण दुर्घटना भएको बताएका छन् । ‘गाडी बिग्रेको थियो, हामीले चालकलाई बिग्रेको गाडी किन चलाउँदै हुनुहन्छ ? राम्रोसँग बनाउनुस् भन्यौं तर चालकले केही हुँदैन भनेर चलाएर ल्याएका थिए । पछि त दुर्घटना भइहाल्यो’ उनले भने । उनी पनि डडेल्धुरा अस्पतालमा उपचाररत छन् ।